Adeegyada Caymiska Iibka iyo Ijaarka gudaha Philippines
KU SAAMEE BILAASH Khadka tooska ah ee Pasta kasta ayaa lagu xisaabtamayaa.Ka keyd caymiskaaga. Hayso QIIME BILAASH daqiiqad ama wax kayar Kaalmo Bilaash ah oo bilaash ah Dammaanad qaad deg deg ah Shuruudaha illaa 6 lacag bixin isku mid ah (bil kasto) Fix 2,000 kaqeybgal shil shaqsiyeed PA Dhakhsaar ...
Waxa daabacay vigattin
arag Adeegyada Caymiska la daabacay 2 years ago
Xulo qaybAccommodations Spare roomsResidential homes Houses Apartments Condos Townhouses UnitsLand lots Residential Land Agricultural LandCommercial Real Estate Office spaces Industrial premisesBusiness Directory Financial Service Providers Pest Control Insurance ServicesReal Estate Agent Directory Real Estate Brokers
Filibiin (dhagayso); Filibiin: Pilipinas [ˌpɪlɪˈpinɐs] ama [fɪlɪˈpinɐs]), oo rasmi ah Jamhuuriyadda Filibiin (Filibiin: Republika ng Pilipinas), waa waddan jasiirado ku leh Koonfur Bari Aasiya. Waxay ku taalaa galbeedka Badweynta Baasifigga, waxay ka kooban tahay 7,641 jasiiradood oo si ballaaran loogu kala qaybiyey sedex qaybood oo juqraafi oo waaweyn oo ka kala yimid waqooyiga ilaa koonfurta: Luzon, Visayas iyo Mindanao. Magaalada ugu weyn dalka Filibiin waa Manila, magaalada ugu dadka badanina waa Quezon City, oo ah labada magaalo ee kaliya ee magaalada Manila. Xudduudda badda koonfureed Shiinaha dhinaca galbeed, Badda Filibiin ee dhanka bari iyo Celebes Sea dhanka koonfur-galbeed, Filibiin waxay xuduudo la wadaagtaa Taiwan dhinaca waqooyi, Japan ilaa waqooyi-bari, Palau dhinaca bari, dhinaca bari ee Indonesia, Malaysiya iyo Brunei dhanka koonfur-galbeed, Vietnam illaa galbeedka, iyo Shiinaha waqooyi-galbeed. Booska Filibiin ee ku yaal Gacanka Badweynta Baasifiga iyo u dhow dhulleyntu wuxuu waddanka u nugul yahay dhulgariirro iyo duufaanno, laakiin sidoo kale wuxuu ku deeqayaa ilo badan oo dabiici ah iyo qaar ka mid ah noolaha ugu weyn adduunka. Filibiin waa dalka jasiiradda shanaad ee ugu weyn adduunka oo leh dhulku 300,000 km2 (120,000 sq mi). Laga soo bilaabo 2015, waxay lahayd ugu yaraan 100 milyan. Laga bilaabo bisha Janaayo 2018, waa dalka sideedaad ee ugu dadka badan Aasiya iyo dalka 12aad ee dadka ugu badan dunida. Qiyaastii 10 milyan oo Filipinos ah oo dibedda ku noolaa ayaa dibedda ku noolaa illaa 2013, kuwaas oo ka kooban mid ka mid ah qurbaha ugu weyn adduunka. Qowmiyado iyo dhaqamo badan ayaa laga helaa jasiiradaha oo dhan. Xilliyadii hore, Negritos waxay ahaayeen degganeyaashii jiilaalka hore. Waxaa ku xigay mowjado is daba joog ah oo ka yimid dadka reer Austronesia. Isweydaarsi ay la yeeshaan Malaysiya, Hindi, Carab iyo Shiinaha ayaa dhacay. Intaa ka dib, dowlado kala duwan oo ku tartamaya badda ayaa la aasaasay iyada oo la raacayo sharciga datus, rajah, sultans iyo lakans. Imaatinka Ferdinand Magellan, sahamin Boortaqiis ah oo hogaamiya duulimaadyo Isbaanish ah, ayaa calaamad u ahaa bilowgii gumeysiga Hispanic. Sannadkii 1543, sahamis reer Isbaanish ah Ruy López de Villalobos wuxuu u magacaabay jasiiradda Laas Islas Filipinas isagoo sharfaya Philip II oo reer Spain ah. Sanadkii 1565, dejintii ugu horreysay ee Hisbaaniya ee jasiiradu ku taal waxaa la aasaasay, Filibiinkuna wuxuu qeyb ka noqday Boqortooyada Isbaanishka in ka badan 300 sano. Intii lagu gudajiray, Katooliggu wuxuu noqday diinta ugu badan, Manila waxay noqotay xudunta galbeedka ee ganacsiga Trans-Pacific. Sannadkii 1896dii kacaankii Filibiin wuxuu bilaabmay, kaas oo markaa ku sii jeeday dagaalkii 1898-kii Isbaanish-American. Isbaanishka ayaa xadka u fidisay Mareykanka, halka fallaagada Filibiin ay ku dhawaaqday Jamhuuriyadda Filibiin koowaad. Dagaalkii Filibiin iyo Mareykanka ee soo socday wuxuu dhammaaday markii Mareykanku aasaasay gacan ku haynta dhulalkii ay ka hayeen, ilaa ay ka qabsadeen Jabbuuti jasiiradi intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Xorriyadda ka dib, Filibiinku wuxuu noqday waddan madax-bannaan 1946 ilaa iyo markaa, qaran madax-bannaan oo mideysan wuxuu had iyo goor khibrad bulsheed ku leeyahay dimoqraadiyadda, oo ay ka mid ahayd afgembigii kali talisnimo ee kacdoon rabshado wata. Filibiinku wuxuu xubin ka yahay aasaaskii Qaramada Midoobay, Ururka Ganacsiga Dunida, Ururka Koonfur Bari Aasiya, Golaha Iskaashiga Dhaqaalaha Asia-Pacific, iyo Shirka Bariga Aasiya. Waxay kaloo martigelisaa xarunta Bangiga Horumarinta Aasiya. Filibiin waxaa loo arkaa inuu yahay suuq soo ifbaxaya iyo waddan warshadeed cusub ku cusub, oo leh dhaqaale ka gudbaya ku saleysan in lagu saleeyo beeraha iyo in lagu saleeyo adeegyo iyo wax soo saar badan.
Caymiska waa hab looga hortago khasaare dhaqaale. Waa nooc ka mid ah maaraynta khatarta oo inta badan loo adeegsado xayndaab looga hortago halista soo socota, khasaare aan la garanaynin. Hay'ad bixiya caymis waxaa loo yaqaanaa ceymis, shirkad caymis, ama shirkad caymis. Qofka ama hay'adda iibsata caymiska waxaa loo yaqaanaa caymis ama siyaasad haye. Macaamiilku wuxuu ku lug leeyahay caymiska oo loo malaynayo dammaanad qayaxan oo aad u yar oo la ogyahay oo ah qaabkii lacag-bixinta ee shirkadda caymiska loogu beddelay ballanta caymiska ee magdhow caymiska haddii ay dhacdo khasaare daboolan. Khasaaraha wuxuu noqon karaa ama ma noqon karo mid dhaqaale, laakiin waa inuu ku xirnaadaa shuruudaha maaliyadeed, waana inuu ku lug yeeshaa wax caymisku leeyahay dano aan la qiyaasi karin oo lagu aasaasay lahaansho, lahaansho, ama xiriir horudhac ah. Caymiska caymisku wuxuu helayaa heshiis, oo loogu yeero caymiska caymiska, kaasoo faahfaahin ka bixinaya shuruudaha iyo duruufaha caymiska ku jira oo dhaqaale ahaan loo siin doono. Qaddarka lacagta uu caymiyaha ku eedeeyey caymiska caymiska ee ku xusan qorshaha caymiska waxaa loo yaqaannaa lacagta caymiska. Haddii caymisku la kulmo khasaaro ay u badan tahay inuu daboolayo caymiska caymisku, caymisku wuxuu u gudbinayaa caymiska caymiska si uu uga baaraandego sheegashooyinka sheegashooyinka.
Dhammaan qeybahaDegaannoGuryaha la degan yahayDhul fara badanHanti Ganacsi GanacsiTusaha GanacsigaTusaha Wakiilaha Guri Guri